SF yakatambarara kupatsanura uye chinu-mitsetse kupfura-kusvina kuumba mutsara kutora jecha kupfura, ine yakatwasuka kupatsanura, slip flask uye uremu. Kurongeka kwepakati pakagadzika, mashandiro ari nyore, yakakwira michina, mitsara yekuumba anoshandiswa zvakanyanya muhukuru-kugadzirwa kweadiki-saizi castings. Mutsetse wese unoumbwa nemuchina wekuumba, jecha rekutakura jecha, slip flask uye kurema kutora uye kudonhedza chishandiso, kunongedzera kutakura uye kugadzira chinhu, synchronous kutonhora bhandi, kudira muchina, nezvimwe.
85 ° ～ 90 ° （GF Kuoma Tester
SF Series Green Sand Automatic Foundry Kukanda Horizontal Parting Flaskless Molding Machine -Iyi otomatiki Kuumbwa muchina iri imwe nzira kune ruoko-chimiro uye yakakwira degree remaotomation, inokodzera, yakachengeteka pasi penzvimbo, muyero unoshanda weaviri-mativi template. Vagadziri kuburikidza nekuunzwa kwemuchina wekuumba muchina, uye nekunyatso kusimudzira kugadzirwa kwehunyanzvi uye kugadzikana kweiyo yekukanda mhando, iri compact miviri, diki fomu chinhu uye haidi gomba, yakanyanya kukodzera shanduko kubva kuchinyorwa modelling kune automation vatengi. Uye zvakare, iwo mamodheru pahwaro hweyakare yakatenderera yekuumba muchina insttutional kugadzirisa. Kumusoro, pasi, pakati, pasi bhokisi panguva imwechete yakatarwa pambiru ina kuti ive nechokwadi checo-bhokisi. Gadzirisa dambudziko rebhokisi risiri iro. Ndege inogona kuve yakagadzirirwa kuumba tambo inoshanduka, uye inogona kuve-kusundidzirwa kutenderera nzira dzekutakura uye otomatiki co-mota roller yekuendesa.Iine compact dhizaini uye yakakwira kuchengetedza mashandiro, nyore kushanda, kufukidza diki pasi nzvimbo uye kuita yakaderera ruzha. .
Inoshandiswa zvakanyanya mukukanda, michina zvikamu, mota nemudhudhudhu zvikamu, mavhavha, mabheyaringi, humburumbira musoro, flywheel dzimba uye brake caliper, asi zvakare pombi inokodzera, shaft uye chifukidziro, senge T mubatanidzwa, gokora uye clampetc.
Muchina wekuumba unoshandisa maviri-mativi template, simba remvura inodzika inowedzera jecha; jecha kuomarara yunifomu, yakakwirira nemazvo bhokisi, jecha bhokisi ukobvu chinjika; template kutsiva kuri nyore; hydraulic mafuta tembiricha kudzora kuve nechokwadi chakanakisa michina mashandiro; muchina uri nyore kushanda, chengetedzo dziviriro, inoonekwa jecha mhando, mushandisi-inoshamwaridzika mashandiro maitiro. Kubudirira kugadzirisa kugadzirwa.
Green Sand Flaskless otomatiki Horizontal Sand richigadzirisa Machine For Kukanda.
Horizontal Kukanda Machine Squeezing Sand Casti ...
Chinwiwa Mould Machine, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Chinwiwa richigadzirisa, Sandbox, Richigadzirisa vachikanda chinu, Punch Out Muchina,